Waxaan aragnay macaamiil aad u tiro badan oo noo imanaya ka dib markii ay lumiyeen tanno lacag ah oo ay ku socdaan ololahooda mushaarkooda guji (PPC) kaligood. Maaha in aysan dhag jalaq u siinin ama aysan u maamulin koontooyinka si ku habboon, waa si fudud in aysan garanayn sida loo saameeyo natiijooyinkooda oo dhab ahaan loo hagaajiyo. Inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in lacag bixinta gujintu ay tahay mid dagaal oo kaliya oo xitaa aysan garwaaqsanayn, iyada oo la wanaajiyo tayada xayeysiiskooda, waxay ka sarreyn karaan kan ugu sarreeya! Maareynta PPC waxay u baahan tahay fiiro gaar ah iyo khibrad badan haddii aad jeceshahay inaad si dhab ah uga faa'iideysato, kharashyada hoos u dhig, oo aad u wareejiso sicirkaaga beddelidda sare!
Dadkuna Pulpmedia waxay diyaariyeen xogtan oo sharraxaysa kakanaanta Google Adwords, Adrank, iyo sida ay xayeysiintaadu ugu sarrayn karto.
Jan 5, 2012 saacadu markay ahayd 1:01 PM
Waa maxay xogta loo adeegsado in lagu go'aamiyo kalsoonida%?
Jan 5, 2012 saacadu markay ahayd 4:54 PM
Ma hubo DisqueD1…. su'aal wanaagsan PulpMedia!
Febraayo 19, 2013 saacadu markay tahay 5: 59 AM
Waxaan u maleynayaa $ .01 inay tahay inta ugu yar ee aad ku darsan karto qaacidadan si aad u hesho qiimaha saxda ah ..
Waxaan la hadlay shirkado badan oo PPC ah, laakiin waxa ugu muhiimsan ee aad dhab ahaantii ku sameyn karto ololahaaga suuqgeynta ayaa ah deg deg deg deg deg ah. Shirkadaha badankood waxay kaa iibiyaan 1 shay oo kaliya sida naqshadeynta websaydhka, ama kaliya Google Adwords, ama kaliya popups, ama kaliya dib-u-habeynta iwm. Dakhliga ganacsigeygu wuxuu kordhay in ka badan 1% muddo labo bilood gudahood ah markaan soo xushay hay'ad wanaagsan oo wax ka qabatay wax ka badan kaliya PPC, laakiin sidoo kale boggeyga degitaankeyga, dib-u-habeynta, xayeysiisyada xayeysiinta, iwm. Xaqiiqdii, waxaan hayaa lambarka taleefanka ee Simon halkan, waad la hadli kartaa sidoo kale. Kaliya isaga ka soo wac 60-302-401.
Sep 24, 2015 at 6: 59 AM
Maqaal wanaagsan ... faa iido badan ..